Afaka manamaivana ny laisoa mena ve ianao rehefa avy masaka?
Sokajy: Fihetseham-po hafa 0
Afaka manangana laisoa mena ve aho rehefa masaka? Ny laisoa mena dia tokony ho masaka mandritra ny 15-20 minitra fanampiny raha tsy voapotsitra tsara. Mivaingana tsara io lovia io. Avelao ny…
Fanontaniana: Ahoana no mahandro saosisy tsy tapaka ny casing?
Ahoana no mahandro saosisy nefa tsy vaky? Na saosisy na saosisy ianao, ataovy azo antoka ny mamadika azy tsy tapaka mba hanafanana sy hisorohana ny vaky…
Inona no azonao ampiasaina ho solon'ny menaka hanaovana sakafo?
Inona no azonao ampiasaina fa tsy menaka? Ity manaraka ity dia azo soloina kaopy ho an'ny menaka legioma amin'ny entana vita amin'ny mofo: Saosy paoma, tsara kokoa raha tsy mamy. Akondro, masaka ary voatoto....
Mitsinkafona ve ny paty rehefa masaka?
Ahoana no ahafantaranao rehefa masaka ny paty? Ny hanandrana azy ihany no ahafantarana raha vita! Tokony ho al dente, na mafy ny…
Tsara ve ny mahandro atody amin'ny menaka bacon?
Mahasalama ve ny manendasa atody amin'ny menaka bacon? Nomarihin'i Tomaino fa tsy ny dibera ihany no tokony hotandremana: ny menaka voanio sy ny menaka bacon dia…
Ahoana no fomba fahandro masaka ao amin'ny BBQ?
Efa masaka tanteraka ve ny Tyson Chicken Nuggets? Ahoana no mahandro hena amin'ny barbecue satroka? Mahandro hen'omby natono miaraka amin'ny barbecue misy saron-tava Afanaina mialoha ao anaty…
Ahoana no ahalalanao fa masaka burger no masaka?
Inona no karazana anana azonao masaka sous vide? Ahoana no ahafantaranao raha efa masaka tanteraka ny burger iray? Raha te hijerena raha vonona ny burger anao dia midira fotsiny…
Ahoana no anaovanao bacon efa masaka?
Ahoana ny fomba fahandro akoho hena efa masaka? Satria efa masaka tanteraka ny bacon, ny hany tsy maintsy ataonao dia ny manafana azy ao anaty microwave amin'ny HIGH mandritra ny 5…
Azo tehirizina mandritra ny alina ve ny hazan-dranomasina masaka?
Ratsy ve ny hazan-dranomasina mandritra ny alina? Raha manafana indray ny sakafo adino teo amin’ny kaontera nandritra ny alina ianao na navela nandritra ny tontolo andro, azo antoka ve ny hohanina?…
Mandra-pahoviana ianao no tokony hanery ny fahandro?
Afaka mahandro ela loatra ve ianao? Indrisy anefa fa rehefa masaka be loatra ny hena iray ao anaty fatana fanerena dia tsy misy miverina intsony. Ho tavela amin'ny antontam-bato ianao…
1 2 ... 6,569 Manaraka
Nanontany ianao hoe: Azoko atao ve ny manendy pie ao anaty lafaoro iray?
Fanontaniana matetika: Nahoana ny vorontsiloza mangatsiaka no mipoaka rehefa endasina?
Fanontaniana: Inona no mahatonga ny sakafo feno?
Inona no azoko diovina amin'ny vovo-mofo?
Afaka mahandro taolan-tehezana mangatsiaka va ianao?
Inona avy ireo lavadavaka?
Ahoana ny fomba hanalefahana ny makamba masaka?
© 2022 Andao hihinana?